म्यानमारमा सेनाको विमान वेपत्ता
म्यानमार । १०५ जना यात्रु सवार सेनाको विमान म्यानमारमा वेपत्ता भएको छ । उक्त विमान दक्षिणी शहर मेइकबाट राजधानी यांगूनका लागि उडेको समाचार संस्था रोयटर्सले जानकारी दिएको छ ।
म्यानमारको सेनाले विमानसँग स्थानीय समय अनुसार दिउँसो १ः३५ बजेपछि सम्पर्क विच्छेद भएको र त्यसबेला विमान....
कतार प्रति सहानुभूति देखाए वर्षै जेल र लाखौँ जरिवाना
अबुधाबी । संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएइ) ले आफ्नो नागरीकहरुलाई कतार प्रति सहानुभूति नदेखाउन चेतावनी दिएको छ । युएइको महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सामाजिक सञ्जालमा कतार प्रति सहानुभूति देखाउनेलाई १५ वर्षसम्म जेल सजायँ र १ लाख ३६ हजार डलर जरिवाना हुने भएको छ ।
कतारमाथि कुनै पनि बेला आक्रमण हुनसक्ने !
काठमाडौं । साउदी अरबले कतार माथि कुनै पनि बेला आक्रमण हुन सक्ने बताएको छ । इन्स्ट्च्यिुट फर गल्फ अफेयर्सका संस्थापक र निर्देशक प्राध्यापक अली अल–अहमदले कतार माथि कुनै पनि बेला हमला हुन सक्ने बताएका हुन् । ‘कतारमाथि अब आक्रमण हुन्छ । कतारी सिमानानजिक साउदीले सैन्य....
लन्डन आक्रमणमा संलग्न दुईजनाको नाम सार्वजनिक
लण्डन । एकपछि अर्को गर्दै आतंकवादी निशानामा पर्दै आएको बेलायतको लण्डनमा शनिबार राति गराइएको आक्रमणमा संलग्न दुईजनाको नाम सार्वजनिक गरिएको छ । २७ बर्षीय खुर्रम बट र अर्का ३० बर्षका रशीद
रिदवानको नाम सार्वजनिक भएको छ । खुर्रम पाकिस्तानी नागरिक रहेको र रशीदको सम्बन्ध....
कतार एक्लिएपछि नेपालीलाई फाइदा कि घाटा ?
इटहरी । कतारका पाँच छिमेकीहरुले ऊसँगको कुटनितिक सम्बन्धविच्छेद गरेका छन् । यो घटनाले विश्व बजारमा तरंग ल्याएको छ ।
विश्वको सबैभन्दा धेरै प्रतिव्यक्ति आय भएको देश कतारले आतंकवादी गतिविधिमा सघाएको भन्दै साउदी अरब, इजिप्ट, बहराइन, संयुक्त अरब इमिरेट र यमनले कतारसँगको सम्बन्ध विच्छेद गरेका....
मन्त्रीले रुखमा चढेर फोन गरेपछि
भारत । मोबाइलमा नेटवर्क नभएपछि भारतका एक केन्द्रीय मन्त्रीले रुखमा चढेर फोन गरेको विषय अहिले भारतमा निकै चर्चित भएको छ । ‘डिजिटल इन्डिया’ को नारा दिइरहेको मोदी सरकारकै केन्द्रीय वित्त राज्यमन्त्री अर्जुन राम मेघवालले आफ्नो संसदीय क्षेत्रको भ्रमणका क्रममा मोबाइल नेटवर्कको समस्या सामना गर्नु परेको....
भारतको उत्तरप्रदेशमा भयानक दुर्घटना
भारत । भारतको उत्तर प्रदेशस्थित बरेलीमा ट्रक र बस ठोक्किएर आगलागी हुँदा २० जनाको मृत्यु भएको छ भने करिव एकदर्जन जना घाइते भएका छन् । आइतबार राति यूपी रोडवेजको बस ट्रकसँग ठोक्किएपछि आगो लागेको थियो । आगलागीका कारण बसका सबै यात्रुहरु बाहिर निस्किन नपाउँदा २०....
लन्डन आक्रमणमा संलग्न रहेको आशंकामा हालसम्म १२ पक्राउ
एजेन्सी । एकपछि अर्को गर्दै आतंकवादी निशानामा पर्दै आएको बेलायतको लण्डनमा शनिबार राति गराइएको आक्रमणमा संलग्न भएको आशंकामा प्रहरीले हालसम्म १२ जनालाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा सात जना महिला रहेका छन् ।
तीब्र गतिमा आएको भ्यानले पैदल यात्रीलाई ठक्कर दिँदै भ्यानमा आएका....
बेलायतमा पुनः आक्रमण, ६ जनाको मृत्यु
लण्डन । बेलायतमा पुन आतंककारी आक्रमण भएको छ । लण्डन ब्रिज र बोरोउघ बजारमा भएको आक्रमणमा परि मृत्यु हुनेको संख्या ६ जना पुगेको छ । लण्डनका सरकारी अधिकारीले जानकारी दिए अनुसार तीब्र गतिमा आएको भ्यानले पदैल यात्रीलाई ठक्कर दिएको थियो र त्यसपछि भ्यानमा रहेका व्यक्ति....
मोसुलमा आक्रमण, कयौंको मृत्यु
इराक । इराकको मोसुलमा इस्लामिक अतिवादी संगठन ‘आइएस’ले गरेको आक्रमणमा कयौं नागरिकको मृत्यु भएको छ । आइएसको बर्बरता सहन नसकी मोसुलको ज्याङ्जिली जिल्लाबाट भाग्न लागेका नागरिकमाथि आक्रमण भएको हो । उनीहरुलाई आइएसले गोली प्रहार गरी हत्या गरेको बताइएको छ । आक्रमणमा मारिने धेरै महिला र....